Tile (Meeshaa Furtuu namaa barbaadu) - NuuralHudaa
Tile (Meeshaa Furtuu namaa barbaadu)
Last updated Feb 26, 2018 61
Telefoona keenya yoo mana keeysatti bakka keenne dhabne, telefoona nama birootiin itti bilbillee yoo inni yaame barbaannee argina. furtuun yoo dhabame hoo? teknoolojiin haarawa dhufe kun, “amma booda furtuu eessa kaaye jettanii barbaadaa ooluun hafe” jedha. meeshaan kun haalaan xiqqaadha. furtuu irratti hidhuu ykn wallet(boorsaa) keessa kaayachuu ni dandeenya. achi booda softweer isaa install goonee, telefoona keenyaan wal qabsiisna. yoo fortuu bakka keenne wallaalle, telefoona keenya bannee FIND jennaan. hoggasuma bakka jiruu iyyuu eegala. sagalee isaa dhageeyfataa barbaannee argachuu ni dandeenya jechuudha. haaluma wal fakkaatuun yoo telefoonas dhabne, meeshaa Tile jedhamu kanarraa Button takka tuyna. yeroo san telefoonni keenyas iyyuu eegala. akkanatti wal barbaada teknoolojiin.
​​Telefoonni Kaampaanii HUAWEI amma booda oomishamu…
Dhaabbanni Feesbuuk jiddu gala gamaaggama qabiyyee jalqabaa…
Tile meeshaa xiqqaa gatii rakishaan bitamu yoo tahu, faaydaan isaa garuu haalaan guddaadha. habbaan tokko Amazon irratti $25 qofa. guyyaa hunda furtuu dhabanii barbaadaa ooluu irra, Tile $25n bitanii barbaacharraa oolutu irra woyya fakkaata.
May 23, 2022 sa;aa 2:03 am Update tahe
Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa tamsa’ini dhibee Vayirasii…